Servers | Shwe Web Hosting | Myanmar
Web based application အကြီးစားများအတွက် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် Operating System (OS)၊ သီးခြားသတ်မှက်ထားသော RAM၊ သီးခြားသတ်မှက်ထားသော Storage space နှင့် Full Root Access များပါဝင်သော Virtual Private Server (VPS) နှင့် Dedicated Server များကို Shwe Hosting တွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Shwe Hosting မှ ရောင်းချသည့် VPS နှင့် Dedicated Server ၏ အားသာချက်များ
အသေးဆုံး Plan ဖြင့်စ၍ တဖြေးဖြေးကြီးလာမှ Plan အကြီးကို upgrade လုပ်နိုင်ခြင်း
သက်မှက်ထားသော RAM နှင့် Storage အာမခံမှုရှိခြင်း
99.9% Network နှင့် Sever Uptime အာမခံမှုရှိခြင်း
OS Install လုပ်ခြင်းများ၊ Security ပိုင်းဆိုင်ရာများ ကူညီပေးနိုင်ခြင်း
၂၄နာရီ၊ ၇ ရက်ပတ်လုံး Technical Support ပေးခြင်း
Host လုပ်သည့်နှစ်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Renew လုပ်ရာတွင် (5% ~ 10%) Discount ရရှိနိုင်ခြင်း
သီးသန့် OS / သီးခြားသတ်မှက်ထားသော RAM
နှင့် Disk Space
Virtual Private Server (VPS) ဆိုသည်မှာ Virtualisation ပြုလုပ်ထားသော Server ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် Operating System (OS) install ပြုလုပ်ကာ application အကြီးစားများ host လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ သီးခြားသတ်မှက်ထားသော RAM ၊ သီးခြားသတ်မှက်ထားသော Disk Space များ ၊ Full Root Access များ ၊ Independently Reboot ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း အစရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း 39,000 Kyats (လစဉ်) မှစသည်
နှင့် Disk Space / သီးသန့် Server Hardware
Dedicated Server ဆိုသည်မှာ မိမိအိမ်မှ PC တစ်လုံးကဲ့သို့ Rack Server Hardware တစ်ခုလုံးအား အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် Server ၏ CPU, Memory, Hard Drive, Bus speed များအားလုံး အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
VPS တွင်ဖော်ပြထားသော အကျိုးကျေးဇူးများ အားလုံးရရှိမည့်အပြင် Server တစ်ခုလုံးအား မိမိစိတ်ကြိုက် စီမံအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း 229,000 Kyats (လစဉ်) မှစသည်
Customer များအတွက် နောက်ဆုံးတင်ထားသော Video Tutorial များ
(Video Tutorial များအားလုံးကို Customer များထံသို့ပေးပို့ထားသော Setup Email ထဲတွင်ပါရှိသော Tutorial Link မှကြည့်နိုင်ပါသည်)
(Tutorial - T001)
cPanel သို့ Login ဝင်နည်း
E-mail account တည်ဆောက်ခြင်း
Two-Factor Authentication ထားရှိခြင်း
Webmail သို့ Login ဝင်နည်း
Shwe Web Hosting is the trading name (business name) of NetScriper Company Limited, (registration number 4983) registered in Yangon, Myanmar and NetScriper Limited, (registration number 06915709) registered in England & Wales, United Kingdom since 2009.
Shwe Web Hosting © 2008-2021 NetScriper Co., Ltd. Registered in Myanmar & United Kingdom. All rights reserved.